“Zvinhu Zvose Zvinobvira Kuna Mwari” | Natela Grigoriadis
AKABEREKWA MUNA 1960
AKABHABHATIDZWA MUNA 1987
NHOROONDO YEUPENYU Achangobhabhatidzwa, akashandisa ruzivo rwaakawana paaimbova maneja mune zvekutengeserana kuti mabhuku arambe achiprindwa pachivande.
PAMISANGANO yataiita pakupera kwemakore ekuma1980, muitisi weNharireyomurindi chete ndiye aiva nemagazini yacho uye kazhinji kacho yakanga yakanyorwa nemaoko. Ndakataura nemumwe wevakuru ainzi Genadi Gudadze, ndichida kunzwa kuti taisakwanisawo here kuprinda tega magazini edu.
Nguva yese iyi, hama dzaishandisa kamuchina kemimeograph kuti dzigadzire mabhuku mashoma. Kuti magazini arambe achibudiswa paidiwa mimeograph inotikurumidzei, tapureta, munhu ainyatsogona kutaipa uye paifanira kugara paine mapepa ekushandisa. Asi kuti munhu awane zvese zvaishandiswa pakuprinda, kunyange nepepa racho, aitofanira kutanga apiwa mvumo nehurumende uye zvaiongororwa nematikitivha.
Ndakawana tapureta ndichibatsirwa nemunhu wandaishanda naye uyo aikwanisa kuwana tapureta dzakanga dzisisashandiswi uye dzisisaongororwi nehurumende. Mukoma wangu aiita basa rekutaipa saka aigona kuzotibatsira. Hama dzakagadzira imwe mimeograph uye dzakawana kwadzaizokwanisa kugara dzichitenga mapepa ekushandisa. Takanga tava nezvinhu zvese zvataida, uye pasina nguva magazini yedu yekutanga yeNharireyomurindi yakabva yabudiswa muchiGeorgian.
Asi pane chimwe chinetso chakabva chamuka. Rimwe zuva, Genadi akandiudza kuti, “Tinofanira kutsvaga kumwe kwekutenga mapepa.” Ainge aona mapepa akawanda mune imwe hofisi yehurumende, asi aisakwanisa kuatenga nekuti mapurisa aimuona. Taizoawana sei? Ndakaramba ndichingoti, “Izvi hazvibviri!” Genadi akapindura zvine simba achiti, “Musati ‘Izvi hazvibviri.’ ‘Zvinhu Zvose Zvinobvira Kuna Mwari’!”—Mat. 19:26.
Pandaienda kuhofisi yacho zuva raitevera ndaitya asi ndakaramba ndichifunga mashoko iwayo. Jehovha akandiendesa kune mumwe mukadzi aiva neushamwari aiita basa rekutaipa uyo akabvuma kundiendesera chikumbiro changu kumukuru wepahofisi yacho. Mukuru wacho ainge ari murume wake! Pasina nguva, ndainge ndava kugara ndichitenga mapepa pahofisi iyi uye kubva ipapo hatinazve kuzova nedambudziko rekuwana zvekushandisa.